I-Room • Dixie Orange County Hotel
Dixie Room ngayo
I-38 ye-XNUMX yokuhlala esandul 'ukuhlaziywa esandul' ukulungiswa esinezixhobo ezinokuzilungelelanisa kunye neendawo ezinokubangela ukuba uzive ngathi sinene ikhaya lakho kude nekhaya. Indawo egqibeleleyo yokuphumla emva komhla wokuhlawulela Disneyland! Okanye mhlawumbi emva kosuku olude rollercoasters ekhwele e Knott ka-Berry Farm. Enjali, mhlawumbi na ukuyekelela maxa Huntington Beach.
Igumbi ngalinye linikezelwe ngamabhedi aphakamileyo okumkani okanye iindlovukazi zamabhinqa, iifenitshala zanamhlanje kunye ne-sleek, i-TV, i-friji, i-microwaves kunye ne-intanethi yokufikelela kwi-intanethi. Akukho simo sengqondo. Sinika ukulula kunye nococeko.
Yho kunjalo, Thina IADA ekufikeleleka kwaye ukwamkela izilwanyana nkonzo.
Tyaba Screen TV kunye nentambo
Board Iron and ayina
Inkonzo Room (Limited)
Access Internet Wireless
Pet Friendly (ezongezelelweyo)
Executive King - neerhafu kwi $ 59.00 / ebusuku
Queen kabini - neerhafu kwi $ 69.00 / ebusuku